ညီလင်းသစ်: ကျနော်နှင့် မန္တလေး
Posted by ညီလင်းသစ် au 8.9.08
good post and poem.....
I have same opinion like you about Mandalay.....
ကျွန်မက ၂၀၀၁ ထဲမှမန္တလေးသူ စလုပ်တာလေ။ ဖုန်ထူတာနဲ့ ခြင်ကိုက်တာလေးနဲ့ က မ
န္တလေးရဲ့ အားနည်းချက်လေးပါပဲ။ သူက မြစ်ရေပြင်ရဲ့အောက်နည်းနည်းနိမ့်နေသလိုပဲဆို
တော့ ရေစီးရေလာသိပ်မကောင်းဘူးလေ။ ဒီတော့ခြင်တွေကတော့ နှိမ်လို့ မနိုင်ဘူးထင်ပါ
ရဲ့။ ဖုန်ထူတာကတော့ အပူပိုင်းဒေသတွေ ထုံးစံလိုဖြစ်နေတာ။ မြို့ တော်စည်ပင်က လခ
ကောင်းကောင်းပေးခိုင်းထားရင်တော့ ဖုန်တွေမရှိအောင်လှဲထားကြမယ်ထင်ရဲ့ ကိုညီလင်း
သစ်ရေ။ အခုလို အဝေးကြီးကနေ တကူးတက မန္တလေးကို သတိရသူတွေရှိနေတာသိရ
တော့ မန္တလေးမြို့ ကြီးခုချက်ချင်းလှပ သာယာသွားအောင်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လုပ်ပစ်လိုက်
ချင်မိတယ်။ အဟား။။အတော်လည်း စိတ်ကူးယဉ်တာပဲနော်။
ဟုတ်ပ...မယုဝရီရေ...၊ ကျနော်တို့ရဲ့မန္တလေးကတော့ ပြောလို့ကုန်နိုင်မယ် မထင်ဘူးဗျာ၊ တကယ်တမ်းပြောရ ရင် ရန်ကုန်မြို့ပြင်ဖက်မှာ ပထမဆုံးသွားချင်တဲ့မြို့ဟာ မန္တလေးမဟုတ်ပေမယ့် သူ့ကိုသတိမရဘဲလည်း မနေ နိုင်ပါဘူး....။
မန္တလေးက ခြင်ပေါတယ်လား... သေချာသတိမထားမိဘူး။
အကြိမ်ကြိမ်ရေတွက်လို့မရအောင် ရောက်ပေမဲ့ ခြင်ကိုကိတာ သိပ်မခံစားရလို့ပဲလားးး ဘာလားတော့ မသိပါဘူး..
မန္တလေးက ပူတာတော့ သိတယ်။ ဖုန်ကတော့ တခြားမြို့တွေမှာလဲ ထူတာပဲ မဟုတ်ဘူးလား..ဟင်.။
I've been there for three years(82,83,84).I was SHWE MAN THU(hostal in main).I like the poem . It gave me many thoughts n feeling cos i have not been there since then.
I am one of your blog visitors. I am Mandalay thu. I live in mdy till 2002 since I was born. :)